Argoitia, toerana noforonina ho an'ny sarimihetsika 'Valo Basque surnames?' | Vaovao momba ny dia
Louis Martinez | | kolontsaina, Firenena Basque
Argoitia dia tanàna tsy misy. Ho gaga ianao fa ao amin'ny bilaogy fitsangatsanganana dia miresaka momba ny a tanàna foronina. Fa ny tena izy dia misy fanatrehana ara-batana, na dia tsy miaraka amin'io anarana io aza, fa amin'ny hafa.
Andao hatsahatra ny rodeo. Argoitia io no fametrahana ilay sarimihetsika malaza 'Anaram-pianakaviana Basque valo', iray amin'ireo fahombiazana indrindra amin'ny sinema Espaniola tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ary, na dia fictif aza ny anarany dia tena misy ny zava-misy ara-batana: ilay mandrafitra ireo seho samihafa amin'ny sarimihetsika. Tanànan'ny Euskadi como el Zarautz o Getaria ary na ny Navarrese aza toa Leiza. Raha fintinina dia soso-kevitra izahay hitsangatsangana amin'ireo tanàna tsara toerana nananganana ilay horonantsary voalaza etsy ambony.
1 Ireo vahoaka manome fisiana ara-batana an'ilay Argoitia noforonina
1.4 Leiza, fandraisana anjaran'i Navarra ho an'i Argoitia
2 Ahoana ny fomba hamakivakiana ireo scenario mamorona Argoitia
Ireo vahoaka manome fisiana ara-batana an'ilay Argoitia noforonina
Maro amin'ireo tanàna ireo no anisan'ny tsara tarehy sy tena izy ao amin'ny tontolo ambanivohitra Basque. Ary ny ampahany tamin'izy rehetra dia nandray anjara tamin'ny famoronana ilay tantara foronina Argoitia, ilay tanàna nisy ny fihaonan'izy ireo sy ny tsy fifanarahan'izy ireo. Amaya sy Rafa.
Ny tanàna Gipuzkoan dia manome ny pier toerana ametrahan'ny rain'i Amaya ny sambony. Izy io dia toerana ara-panoharana tena izy hatramin'ny taona sambo fanjonoana. Ny fomban-dranomasina dia fomba iray mampiavaka ny maha izy azy sy ny reharehany amin'ity tanàna tsara tarehy ity. Tsy natao ho tsinontsinona, teraka teo izy Juan Sebastian Elcano.
Raha mitsidika an'i Guetaria ianao dia aza adino ny mandehandeha mamaky ny tanàna taloha mahafinaritra, izay misy ny fiangonana gothic any San Salvador, izay tsangambaton'ny firenena. Ary koa trano mitovy endrika kanto mitovy amin'ny an'ny Làlana San Roque na voaravaka loko mamirapiratra sy lavarangana hazo.
Etsy ankilany, manoro hevitra anao izahay handeha any amin'ny jiro fiasan'ny Mount San Antón, fantatra amin'ny anarana hoe "Ny totozy Getaria", izay ahitanao ny fomba mahavariana momba ny morontsirak'i Cantabrian. Ary, raha tianao ny lamaody, tsidiho ny Museum an'i Cristóbal Balenciaga. Aza miala amin'ny tanàna raha tsy manandrana ny matsiro txacoli.
Seho an-dalambe maro avy amin'ny 'apely' Valo Basque 'no manana an'io tanàna io. Azo fantarina, ohatra, eo amin'ny sehatry ny fampakaram-bady an'ny mahery fo. Ny tempoly izay hitazonana azy dia ny hermitage an'ny San Telmo, miorina eo akaikin'ny hantsam-bato sasany mahavariana izay mandrafitra ny Morontsiraka Itzurun.
Avy amin'io dia azonao atao ny mahita ny tokana flysch, izay sosona vato sedimentary amin'ny karazany samihafa izay mandrafitra tsara ireo hantsana ireo.
Ho fanampin'izay, raha mankany amin'ny tanànan'ny Guipuzcoan ianao dia aza adino ny mitsidika ny iFiangonan'i Md Piera, fananganana Gothic tamin'ny taonjato faha-XNUMX; ny Lapan'i Foronda sy Olazábal ary ny tranombakoka natokana ho an'ilay mpanao hosodoko lehibe Ignatius Zuloaga. Fa ambonin'izany rehetra izany, aza hadino ny mandeha mamaky ny arabe tery sy ny marina.
Ity villa ity koa dia nisolo tena an'i Argoitia tamin'ny sarimihetsika. Misongadina amin'izany izy tora-pasika paradisan'ny mpitsangantsangana izy ireo. Fa manolotra ensemble tsara tarehy ihany koa izy io.
Ao amin'ny tanàna taloha dia hahita be dia be ianao trano mihaja misy ampinga eo amin'ny endriny toy ny an'ny Làlana Azara sy Zigordia. Anisan'izany ny trano Gamboa, Portu na Makatza; ny Lapan'i Narros miaraka amin'ny zaridaina anglisy mahafinaritra na ny tilikambo Luzea, fananganana Renaissance tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
Lapan'i Narros any Zarautz
Azonao atao koa ny mahita ao Zarautz tsangambato ara-pivavahana maro toy ny fiangonana Santa María la Real, natsangana tamin'ny taonjato faha-XNUMX, ary ny fivorian'ny Santa Clara sy ireo Ray Fransiskanina, ity farany manaraka ny fiangonan'i San Juan Bautista.
Ho azy ireo, lapan'i Sanz Enea sy Villa Munda Izy ireo dia santionan'ny trano izay naorin'ny bourgeoisie Basque tao an-tanàna tamin'ny fahavaratra. Na izany aza, ny tena mampiavaka an'i Zarautz dia ny trano fiompiana ny ambanivohitra. Tsara tarehy indrindra izy ireo ny an'i Gurmendi, Aierdi na Agerre.
Leiza, fandraisana anjaran'i Navarra ho an'i Argoitia
Manova ny lalanay izahay amin'ny alàlan'ny sarin'antso 'surnames Valo Basque' hahatratra ny tanànan'i Leiza any Navarrese. Tao amin'ity villa tsara tarehy ity aho Tranon'i Amaya ary, ohatra, ny fisakafoanana natokana ho an'ireo mpilalao efatra dia naka sary tao.
Any amin'ny maitso manaitra sy maitso Lohasaha Leizarán, Manome anao tsara tarehy ity tanàna Navarran ity Lapan'ny tanàna natsangana tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX; ny Fiangonan'i San Miguel ary ny hermitage an'i Santa Cruz, miorina eo amin'ny havoana any ivelany.
Tsara homarihina ihany koa ao Leiza ny sarivongana natokana ho azy Manuel Lasarte, malaza bertsolari eo an-toerana, izany hoe, improviser ny andininy. Ary ny tranombakoka vato an'ny manainga malaza Iñaqui Perurena, hita ao amin'ny Trano fiompiana fianakaviana Gorrittenea, eo ivelan'ny tanàna.
Mahaliana fa ity villa tsara tarehy ity dia manana Ivon-kolontsaina Al Andalus ary miaraka amin'ny flamenco peña. Tsy mahagaga, noho izany, fa nampiasaina handefasana horonantsary ilay horonantsary niseho tao anaty fisotroana iray tao Sevilla.
Fa afaka mitsidika an'i Mondragón the ihany koa ianao fiangonana ao San Juan Bautista, Gothic tamin'ny taonjato faha-XNUMX na dia ny tilikambo lakolosy aza dia tamin'ny taonjato faha-XNUMX, ary avy any San Francisco, izay manambatra ny fomba Herrerian sy Baroque. Ary toy izany koa, ny fananganana ny Town Hall, koa baroque sy fahafito ambin'ny folo, ary lapa toa ny any Andinako-Loyola, Oquendo ary Monterrón.
Ahoana ny fomba hamakivakiana ireo scenario mamorona Argoitia
Ny fomba tsara indrindra hitsidihana ireo tranga noresahinay ireo dia ny lalambe. Manana bus ianao izay mamakivaky ilay faritra, fa manoro anao izahay hampiasa ny fiaranao manokana. Araka izany, tsy hiankina amin'ny fandaharam-potoana ianao ary hijanona amin'ny toerana tianao sy rehefa tianao izany.
Ny zavatra mahazatra dia ny ahatongavanao amin'ny morontsirak'i Guipuzcoan eo akaikin'ny AP-8. Avy eo dia tsy maintsy mivaona amin'ny N-634. Ity lalana ity dia hitondra anao mankany Zarautz, Guetaria ary Zumaya. Etsy ankilany, raha mankany Mondragón, tsy maintsy miala amin'ny A-8 ianao amin'ny haavo Elgoibar handray ny AP-1.
Etsy ankilany, raha te-ho tonga any Leiza ianao avy amin'ireo tanàna teo aloha dia tsy maintsy manaraka ny A-8 ianao, avy eo ny A-15 ary farany ny NA-170.
Ho fehiny, Argoitia Izy io dia toerana noforonina noforonin'ny mponina izay nohazavainay taminao toetra ara-batana. Noho izany, raha te-hitsidika ireo seho amin'ilay horonantsary 'Eight Basque surnames' ianao dia tokony hitsidika an'i Zarautz, Zumaya, Guetaria, Leiza ary Mondragón. Ireo tanàna rehetra ireo dia manana zavatra betsaka aseho anao sy ny dia hahaliana anao izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Firenena Basque » Argoitia
Cala Llombards any Mallorca
Inona no ho hita ao Extremadura